YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, September 23
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/23/20090အကြံပြုခြင်း
ဗိုလ်ချုပ် ဆန်းဆင့်ရဲ့ သား ဦးဇော်မင်းယူရဲ့  ဆိုင်--နောက်ကွယ် ဖြစ်ရပ်
ဗိုလ်ချုပ် ဆန်းဆင့်ရဲ့ သား ဦးဇော်မင်းယူရဲ့  အနောက်ရွှေ၈ုံတိုင်မှBluray Digital IT
- အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးရင် ထိုစဉ်ကနဝတ၊ အခုနအဖတို့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပေးထားတဲ့ ကတိတွေအတိုင်း လုပ်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက အလိုလို သိနားလည်ထားကြပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ကြမ္မာ အကောင်းဘက်ကိုရှေးရှုကြပြီ ရန်သူနဲ့အပစ်အခတ်ရပ်စဲချင်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ရပ်စဲလိုက်ကြရ ပါတယ်။ နောက်တော့ နအဖ ဖက်က ကတိတွေ တဆင့်ပြီးတဆင့် ဆက်ပျက်လာတာကို နဖူးတွေ့၊ဒူးတွေ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြ ရပါတယ်။ အချို့ကိစ္စကို အသေးအဖွဲဖြစ်ရပ်တွေလုိ့ သဘောထားလိုက်ပြီးမေ့ပစ်လို့ရပေမယ့် မေ့ပစ်လို့မရနိုင်တဲ့ အဖြစ် အချို့လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
နဝတနဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ ၁၉၉၄ နှစ်အစကစပြီး တစ်နှစ်ခွဲခန့် လေးကြိမ်တိုင်တိုင် အချိန်ယူဆွေးနွေးခဲ့ကြရပါတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဇွန်လ၂၉ ရက်နေ့မှာ အပစ်ရပ် နှစ်ဖက်သဘောတူညီ အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတုန်းက မွန်ပြည် သစ်ပါတီမှာရှိနေလို့ ဒီလိုအပစ်ရပ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ အပစ်ရပ်အခမ်းအနားတွေမှာ စာရေးသူလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မွန် ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ နဝတတို့ ဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့အပစ်ရပ် အကြောင်းအရာများစွာထဲက စာရေးသူမေ့လို့မရနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို တင်ပြလိုပါတယ်။
အကြောင်းအရာပြဿနာက ဒီအပစ်ရပ်အခမ်းအနား မစတင်မီတစ်ရက်၊ ညနေမှာစခဲ့တာပါ။ နောက်တစ်နေ့အခမ်းအ နားမှာ မွန်ပြည်သစ်ကိုယ်စားလှယ်များ နေရာယူဖို့ Sitting Plan အနေအထားကို Staff တွေဖြစ်ကြတဲ့ စာရေးသူတို့ ကြိုတင်သွားရောက် လေ့လာကြည့်ရှုရပါတယ်။ အခမ်းအနားကျင်းပမယ့် ရတခ အောင်ဆန်းခန်းမကို လှမ်းမြင်လိုက် တယ်ဆိုရင်ဘဲ မျက်နှာစာမှာ“တရားဥပဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသော မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား လှိုက်လှဲစွာကြို ဆိုပါ၏” ဆိုတဲ့ အနီရောင်အောက်ခံ အဖြူရောင်စာတမ်းကြီးကို တွေ့မိလိုက်တော့ ကြက်သီးဖြန်းကနဲ ထသွားပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အခမ်းအနားတရားဝင် မကျင်းပရသေးခင် နဝတတို့က စည်းတစ်ခုကို ကြိုတင်ဖေါက်လိုက်ပြီဆို တာအလိုလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ မွန်ပြည်သစ်ကပြောကြားမယ့် မိန့်ခွန်းတွေကအစ စကားလုံးဝေါဟာရ အသုံးအနှုံး တွေပါ နဝတနဲ့ကြိုတင်သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ရပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာရေးသားမယ့် ခေါင်းစည်းစာတမ်းတွေကိုလည်း နှစ်ဖက် အလုပ်ကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း သဘောတူညီချက်မှာ “တရးဥပဒေဘောင်အတွင်းဝင် ရောက်လာသောမွန်ပြည်သစ်ပါတီအား လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏” ကိစ္စမပါခဲ့ပါ။ လက်နက်ချဖို့မဟုတ်သလို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမဟုတ်ပါ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲသာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနဖူးစည်းကိစ္စကို စာရေးသူတို့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အကြီးအကဲများထံ ချက်ချင်းတင်ပြလိုက်ကြပါတယ်။ မိမိ တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေ အားလုံးစုပြီး ချက်ချင်းဘဲ အရေးအပေါ်အစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကျင်းပနိုင်ဖို့ ကြိုတင်ဆွေးနွေးချက်တွေမှာ ဒီနဖူးစည်းစာတမ်းမပါရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ဒီအရေးအသားကြောင့် အနာဂတ်ကာလမှာ ရှုတ်ထွေးစေနိုင်တာကြောင့် ဒီလိုဝေါဟာရတွေမသုံးသင့်ဘူးဆိုပြီး စာရေးသူတို့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တဆက် တည်းမှာ ဒီနဖူးစည်းစာတမ်းကိုဖြုတ်ပေးဖို့ ရတခကိုရောက်ရှိနေတဲ့ နဝတအကြီးအကဲများကို ဆက်ပြီးတင်ပြလိုက်ပါ တယ်။ ပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာပဲ စာရေးသူသိလိုက်ရတယ်။ မနက်စောစော ၅ နာရီအရောက် အောင်ဆန်းခမ်းမကို ရောက်နိုင်ဖို့ဘဲ အိပ်မပျော်လည်း အောက်သက်သက်၊ မခံချိမခံသာနဲ့ ရတခဧည့်ရိပ်သာမှာ မှေးစက်အိပ်လိုက်ရပါတော့ တယ်။
နောက်တစ်နေ့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက်စောစောမှာ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသော မွန်ပြည်သစ်ပါ တီအား လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏ အခန်းအနား နဖူးစည်းစာတမ်းအောက်ကို လှိုပြီးစာရေးသူတို့ မွန်ပြည်သစ်ကိုယ်စား လှယ်တော် စုစုပေါင်း ၃၀ ဦး တက်ရောက်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့သူ ၃၀ ဦးဆိုရင်လည်း အခု ဆိုရင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှာ ၁၀ဦးလောက်တောင် မရှိကြတော့ပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အနားယူသွားခဲ့ကြ ပါပြီ။
ထို့အတူ ဒီလိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ရေးအတွက် တစိုက်မတ်မတ် စည်းရုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ နဝတကိုယ်စားလှယ်တော် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဝင်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းဆွေ(ထိုင်းစစ်သံမှူး)၊ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သိန်း၊ ဗိုလ်မှူးစန်းပွင့် စတဲ့ထ်ိပ်သီး ထောက်လှန်းရေးအကြီအကဲများနဲ့ ရတခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကက်စိန်တို့တတွေ အခုဆိုရင်ဘယ်ချောင်ထဲ ရောက်နေလေသလဲဆိုတာ မသိရတော့ပါ။
နဝတနဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာမှာ နဝတအနေနဲ့ သူတို့ဟာတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုဟာ တရားဝင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့များအပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့နဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ကြ ဖို့ပဲ လှို့ဝှက်ဆွေးနွေးပွဲတွေ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောင်တက်လာမယ့် အရပ်သားအစိုးရနဲ့ပဲ နိုင်ငံရေး အရဆက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားဖို့ပဲ လမ်းကြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် KNU တစ်ဖွဲ့နဲ့ထပ်ပြီးအပစ်ရပ်နိုင်ရင် ရွေး ကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ပြီလို့လည်း လေသံပစ်ပေးထားပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ အပြောတစ်မျိုး၊ အလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။
အခုတလော နအဖသတင်းစာတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းရောက် ရှိနေရမယ်လို့ကိုးကန့်ဒေသ အထူးဒေသ(၁) ဖြစ်ရပ်တွေအပြီး နအဖသတင်းစာတွေထဲမှာ ဖေါ်ပြနေပါတယ်။အခုဆိုရင် အပစ်ရပ်တွေအပေါ် နအဖကပေးထားတဲ့ကတိတွေကို အလေးမထားတော့ပါဘူး။ လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာ အကောင်အထည်ဖေါ်လိမ့်မယ်လို့ သတင်းတွေဖြန့်ထားပါတယ်။ စစ်အစိုးရအရာရှိတွေ ၁၀% ပါဝင်မယ့် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့(သို့မဟုတ်) ဒေသခံအာဏာပိုင်လက်အောက်က ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့အသွင်နဲ့ ရပ်တည်သွားခိုင်းနေပါတယ်။
တကယ်တော့ နအဖဟာ အာဏာသိမ်းနဝတအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ တရားဥပဒေ အရ ဘောင်မဝင်ပါဘူး။ သူတို့ ကမ္ဘည်းထိုးတင်ထားတဲ့ တရားဥပဒေဘောင်ဆိုတာ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အသိအမှတ် ပြုတဲ့ တရားဥပဒေဘောင်မဟုတ်ဘဲ နဝတ၊ နအဖရဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာသာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးဆန္ဒ အစစ်အမှန်ကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်က အတည်ပြုမှသာ တရားဥပဒေအရ ဘောင်ဝင်ပါ မယ်။
နအဖဟာ သူကိုယ်သူအစိုးရလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တာ ကြောင့် သူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားညီလာခံဟာ အတုအယောင်ဖြစ်တယ်။ ဒီကအဖြေထွက် လာတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကလည်း ပြည်သူဆန္ဒအစစ်အမှန်ကို လိမ်ညာခဲ့တာကို ပြည်သူတရပ်လုံး ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ ရပါပြီ။ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း ဥပဒေအရ ဘောင်မဝင်ပါ။ ဒါကြောင့် နဝတ၊ နအဖတို့ ပါးစပ်ပေါက်က ထွက်လာတဲ့ တရားဥပဒေဘောင်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ဥပဒေဘောင်ဘဲဖြစ်တာမို့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားမပြုပါကြောင်း။
၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉
စစ်မှန်တဲ့တော်လှန်ရေးဟာ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲရေးဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ သိပ်ဟုတ်တာပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်လူထွက်တွေက ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုပြီး သူများကို အမိန့်ပေးခိုင်းစေနေတာဟာ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပါ။ စစ်တိုက်ရင် စစ်ခေါင်းဆောင်က နောက်ဆုံးမှာနေတယ်။ စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေက ရှေ့ဆုံးက တိုက်ရတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ဒါမျိုးလာလုပ်ရင် ဒီလိုခေါင်းဆောင်နောက်ကို ဘယ်သူမှ လိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာ ခေါင်းဆောင်ဟာ ရှေ့ဆုံးကနေရတယ်။ ခေါင်းဆောင်အဖမ်းခံရရင် နောက်တယောက်က သူ့နေရာကို ယူရတယ်။ ဒါနိုင်ငံရေး ဓလေ့ပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင် အတွေးအခေါ်ပြောင်းလဲဖို့ အလွန်အရေးကြီးတယ်။ အရပ်သားက စစ်ဗိုလ်လိုကျင့်ကြံနေရင် ဒီမိုကရေစီအနားတောင် ကပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရုံနဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး။ အတွေးအခေါ် မပြောင်းလဲရင် ရွေးကောက်ပွဲအာဏာရှင်စနစ်ပဲရမယ်၊ ဒီမိုကရေစီကို ရမှာမဟုတ်ဘူး။ လူဆိုတာ အကျင့်ဓလေ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ သတ္တ၀ါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်။ အတွေးအခေါ်မပြောင်းရင် အကျင့်ဟောင်းကို မစွန့်နိုင်ပါ။
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဒေသကို ဗုဒ္ဓ၀ါဒရောက်လာတာ အနှစ်တထောင်ကျော်ပြီဖြစ် ပေမယ့် ရုပ်ဝတ္ထုကိုးကွယ်တဲ့ ဗမာ့ဓလေ့ဟာ ကွယ်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ အဲနားမစ်ဇင် (animism) ခေါ် ရုပ်ဝတ္ထုကိုးကွယ်တဲ့ဓလေ့ဟာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနဲ့ ရောစပ်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးတော့ အားကောင်းသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ ‘ကိုယ်ထူကိုယ်ထသဘာဝ’ ကို ဗမာအများစုက နားမလည်တော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံရတာဟာ ခက်ခဲပင်ပန်းပြီး သူများကို ကိုးကွယ်ရတာက လွယ်တာကိုး။ တရားအားထုတ်တာက ပင်ပန်းခက်ခဲပြီး ဆွမ်းကပ်ရတာက လွယ်ကူတဲ့သဘောပါပဲ။
ဗမာဘုရင်ဟာ အာဏာရှင်ပဲ။ တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုတောင် ဗမာဘုရင်က ဆုံးဖြတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဗမာစစ်အစိုးရဟာ ထင်သလို ရေးချင်တာရေးပြီး ပြည်သူ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေတာပဲ။ ပြည်သူကို သတ်ဖြတ်ပြီး ဘုရားတည်လိုက်ရင် ပြည်သူရှိခိုးတာကို ခံရမယ်ဆိုတာ ဗမာစစ်ဗိုလ်နားလည်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်ခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့က ဘုရားတည်ကြတာ။ ခိုင်မာအောင် ဘိလပ်မြေများများ၊ အုပ်နီခဲများများထည့်ပေါ့။ ဘုရားဖြစ်မယ့် အုပ်နီခဲဆိုတဲ့ ဗမာစကားရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒအနှစ်သာရကို ဗမာတွေနားမလည်တော့ အုပ်နီခဲတွေ ဘုရားဖြစ်ကုန်တာပေါ့။
နတ်ပေါင်းများစွာ ကိုးကွယ်တဲ့ ဗမာ့ဓလေ့အစား နတ် (၃၇) မျိုးကိုသာကိုးကွယ်ဖို့ သတ်မှတ်သူဟာ အနော်ရထာမင်းဖြစ်တယ်။ သီကြားမင်းခေါင်းဆောင်တဲ့ (၃၇) မင်းနတ်အုပ်စုဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာထက် နိမ့်ကျတယ်လို့ အနော်ရထာမင်းက သတ်မှတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အနော်ရထာခေတ်ကစပြီး နတ်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရောထွေးယှက်တင်ဖြစ်လာတယ်။ ဘုရားရှိခိုးပြီး နတ်ပူဇော်တာဟာ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့ဖြစ်လာတယ်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒရှိနေပေမယ့် ကောင်းကောင်းနားမလည်တော့ ဗမာ့အတွေးအခေါ် ပြောင်းမသွားဘူး။
ကြာလာတဲ့အခါမှာ နတ်တွေရဲ့ တန်ခိုးအာဏာအဆင့်အတန်းကို လူတွေမေ့ကုန်ကြတဲ့အတွက် ဗမာမင်းက သတ်မှတ်ပေးရပြန်တယ်။ (၃၇) မင်းနတ်အုပ်စုရဲ့ တန်ခိုးအာဏာအနိမ့်အမြင့် အထက်အောက် သတ်မှတ်ပေးတဲ့ ဘုရင့်အမိန့်ကို ၁၈၂၀ ခုနှစ်မှာ ဘကြီးတော်မင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ နတ်ကိုမင်းလို့ခေါ်ပြီး နတ်ကွန်းကို နတ်နန်းလို့ခေါ်တာဟာ နတ်ကိုမင်းမြှောက်တာပဲ။ ဘုရင်ကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ နတ်တွေကို နတ်နန်းဆောက်ပေးပြီး ပူဇော်ပသပါတယ်။ တနည်းဆိုရင်တော့ ဘုရင့်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် နတ်ကိုးကွယ်မှုကို ဘုရင်ကိုယ်တိုင် အားပေးတာပဲ။ စစ်ဗိုလ်ထဲမှာလည်း ရာထူးကြီးလေ နတ်ကိုးကွယ်လေဖြစ်နေတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ ဗမာလူမျိုးဟာ နက္ခတ်ဗေဒင်၊ ပယောဂ၊ မှော်အတတ်၊ ထိုးကွင်းမင်ကြောင်နဲ့ အတိတ်နိမိတ်ကို ယုံကြည်ကြတာများတယ်။ အတိတ်နိမိတ်ဆိုးပေါ်လာပြီး မကြာမီ ရှင်ဘုရင်သေဆုံးရပုံကို ဗမာရာဇ၀င်ကျမ်းတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်ခေတ်က နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအမည်ခံတဲ့ ဒေါက်တာဘမော်ရဲ့ ခြံဝန်းထဲကို လိပ်တကောင်ဝင်လာပြီး မကြာမီ ဒေါက်တာဘမောင်ဟာ ဂျပန်နဲ့အတူ ထွက်ပြေးရပုံကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ ‘လိပ်’ ဟာ အင်္ဂလိပ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အတိတ်နိမိတ်မို့ အင်္ဂလိပ်ဝင်လာလို့ ဒေါက်တာဘမော် ထွက်ပြေးရတာကို နိမိတ်ကောက်ထားတာပါပဲ။ ဒေါက်တာဘမော်ဟာ အင်္ဂလန်မှာ ရှေ့နေစာမေးပွဲအောင်ပြီး ပြင်သစ်မှာ ပါရဂူဒေါက်တာဘွဲ့ရယူထားတဲ့ ခေတ်ပညာတတ်ဖြစ်ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စစ်ရှုံးအောင် ၀ိုင်းတိုက်ပေးကြဖို့ နတ်ပေါင်းစုံကို ပူဇော်ပသတယ်။ ပညာတတ်တိုင်း အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။
အယူသီးတဲ့ဗမာတွေဟာ ပုဏ္ဏားနဲ့ဗေဒင်ဆရာမပါရင် ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ (၁၉) ရာစုနှောင်းပိုင်းထုတ် အစိုးရပြန်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုရင် ရက်ကောင်းရက်မြတ် ရွေးရတာကလည်း အလုပ်ကြီးတခုလိုဖြစ်နေတယ်။ ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက်နေ့ မနက် (၄) နာရီ၊ မိနစ် (၂၀) မှာ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ကြေညာတာကလည်း ဗေဒင်ဆရာ့ လက်ချက်ပါပဲ။ အိန္ဒိယမှာတော့ ဗေဒင်ဆရာက ည (၁၂) နာရီမှာ လွတ်လပ်ရေးယူခိုင်းတယ်။ မနက် (၄) နာရီမှာ လွတ်လပ်ရေးရတာမို့ အခမ်းအနား တက်သူတွေအားလုံး အစောကြီးထကြရတယ်။ ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်အရာရှိတဦးက ကြိုက်သလို လုပ်ကြပေါ့ကွာ။ ငါတို့ ဒီတခါပဲ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ မင်းတို့ကတော့ အမြဲတမ်းအိပ်ရေးပျက်မှာပါလို့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားတယ်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကစပြီး ဗေဒင်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း ယုံကြည်နေရင် ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့အညီ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။
၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု စီးလာတဲ့မော်တော်ကား ခွေးတကောင်တိုက်မိတာကို နိမိတ်မကောင်းဘူးလို့ ယူဆပြီး ခရီးဆက်မသွားတော့တာကိုလည်း ကြားဖူးတယ်။ ဆရာဝန်အပါအ၀င် ခေတ်ပညာတတ်တွေထဲမှာ ကလေးနေမကောင်းတာကို ဗေဒင်မေးပြီး ယတြာချေသူတွေရှိတယ်။ စစ်ဗိုလ်တွေကလည်း အကြားအမြင်ရသူနဲ့ ဗေဒင်ဆရာကို အားကိုးကြတယ်။ ဘုရားကိုးဆူဆိုတဲ့ ဂြိုဟ်ပူဇော်ပွဲကို ကျင်းပနေကြတုန်းပါပဲ။ ရည်ရွယ်ချက်က မကောင်းတာတွေ ပျောက်ကွယ်ဖို့တဲ့။
ဒီလိုအယူသီးပြီး အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့ဗမာတွေမှာ အာဏာရှင်ဓလေ့ကိုလိုလားတဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိတယ်လို့ ကွယ်လွန်သူ သမိုင်းဆရာ ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးက ယူဆတယ်။ အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတဲ့ ဗမာတွေဟာ (၂၀) ရာစုရောက်လာတော့လည်း အာဏာရှင်စနစ်ကို တောင့်တနေတုန်းပဲလို့ ဆရာမောင်မောင်ကြီးက ဆိုတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီက အင်္ဂလိပ်ကို ပြိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ နာဇီဂျာမဏီ၊ ဖက်ဆစ်အီတလီနဲ့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို ဗမာခေါင်းဆောင်တွေ သဘောကျကြပြီး ဒေါက်တာဘမော်က သူ့ကိုယ်သူ အာဏာရှင်လို့ ကြေညာခဲ့တယ်။ ဂျပန်ခေတ်က ကျင်းပတဲ့ လွတ်လပ်ရေးအခမ်းအနားမှာ ဒေါက်တာဘမော်ကို ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ရည်ညွှန်းပြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက ကျမ်းကျိန်ပွဲမှာ ပြောဆိုသွားတယ်တဲ့။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းငယ်စဉ်ကလည်း အင်္ဂလိပ်ကို တန်ပြန်နိုင်တဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို အားကျဖူးတယ်။ “ခေါင်းဆောင်မှု မှန်ကန်ရင် အားလုံးကောင်းမွန်ပြီး၊ ခေါင်းဆောင်မကောင်းရင် အားလုံးကမောက်ကမဖြစ်ကုန်တယ်လို့ ဗမာတွေက ယုံကြည်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ပြရုပ်သာမဟုတ်ဘဲ တကယ်စွမ်းဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရတခု၊ ပါတီတခုနဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးသာ ရှိသင့်ပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာကို လူတိုင်းနာခံရမယ်လို့ ၁၉၄၂ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဂျပန်ပြည်မှာ ရေးခဲ့တယ်။
ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်ကို အကူအညီတောင်းဖို့အသွား ဂျပန်မှာရေးတဲ့ လွတ်လပ်ရေးစီမံကိန်း စာတမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို အမွှန်းတင်တာပဲ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ဂျပန်စစ်ရှုံးလို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသာ ထောက်ခံပြောဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ‘ဒေးဗစ်စတိုင်းဘတ်’ ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ပညာရှင်ကလည်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ဆန်း ဂျပန်ပြည်မှာရေးခဲ့တဲ့ စာတမ်းလေးကို ထောက်ပြပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အာဏာရှစ်စနစ်လိုလားသူအဖြစ် မဆင်မခြင် စွပ်စွဲခဲ့ဖူးတယ်။
ဗမာတွေမှာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အကျင့်ဓလေ့ရှိနေတာမို့ ကွဲလွဲတဲ့သဘောထားကို လက်မခံနိုင်တာလို့ ဆရာမောင်မောင်ကြီးက ယူဆတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ‘ရပိုင်ခွင့်တွေ’ မဟုတ်ဘဲ လေ့ကျင့်ယူရမယ့် အကျင့်ဓလေ့သာဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမိုင်းပါမောက္ခဟောင်း B.R.Pearn က ပြောဖူးပါတယ်။ မိမိရထားတဲ့အာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထင်သလိုအလွဲသုံးစား လုပ်တာဟာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ ဗမာစရိုက်ဖြစ်တယ်တဲ့။ အထက်အောက် ဆက်ဆံရေးပုံဆံဟောင်း အပိုးကျိုးနေတာကလည်း အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ စရိုက်ဆိုးကို အားပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလန်မှာတော့ မတရားလုပ်တဲ့ အစိုးရအမှုထမ်းကို ခံချတဲ့အစဉ်အလာကြီးမားတာမို့ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှု နည်းပါးတယ်။
ဗမာပြည်မှာတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ရာထူးနဲ့သြဇာအာဏာရှိပြီဆိုတာနဲ့ မာနကြီးမောက်မာပြီး နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်တော့တာပါပဲ။ ရာထူးပြုတ်သွားတော့မှ မနေတတ်မထိုင်တတ် ရှက်သလိုလို ကြောက်သလိုလိုနဲ့ ဟိတ်ဟန်မထုတ် ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် ပြန်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ အာဏာကို အထင်ကြီးလွန်းတာကြောင့် အာဏာရှိသူရှေ့ရောက်ရင် ဗမာတွေဟာ ကြောက်လန့်ပြီး ခခယယလုပ်တော့တာပဲလို့ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုအနီအရာရှိတဦးက မှတ်ချက်ချဖူးတယ်။ အာဏာရှိသူကို ကြောက်ပြီး အာဏာမရှိသူကို အထင်သေးတာဟာ ဗမာ့အကျင့်ဓလေ့လိုဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် အတွေးအခေါ်ပြောင်းလဲဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ကိုညီညီအောင်၏ သတင်းကို MRTV တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာသွား
This message from Ma Wa---
On Sunday, I was informed by the Consul by telephone that he had been given access to meet with Lwin at Insein Prison. At this meeting the Consul learned the following facts about the detention:
* No food was provided to the prisoner for7days.
* He was repeatedly tortured (punches to the face, kicks on the body, twisting of his arms) the entire period of the incarceration.
* He was moved to several different interrogation centers before holding him at Insein Prison in Rangoon suburbs.
* He was not allowed to sleep at night due to the frequent interrogations all through the night.
The request by Lwin, through the Consul, to receive medical attention as he was quite ill, was denied by the Burmese authorities. I understand that Lwin will be officially charged on October 1, 2009.
မျိုးဆက်လှိုင်း / Generation Wave Songs
ကျနော်တို့ Generation Wave (မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး) မှသီချင်း ၇ပုဒ်ပါခွေတစ်ခွေကိုရေးစပ်သီဆိုပြီး
IBMO Announcement on 9-23-09
ဗိုလ်ချုပ် ဆန်းဆင့်ရဲ့ သား ဦးဇော်မင်းယူရဲ့  ဆ...